Wasiirka warfaafinta somaliland oo ceydii hablaha cidagle ku halley wasiirnimo; muusna muu la, ogaa | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Wasiirka warfaafinta somaliland oo ceydii hablaha cidagle ku halley wasiirnimo; muusna muu la, ogaa
Waxaad la wadda socotaan in 2012 kii ( c raxmaan barwaaqo oo ah wasiirka warwafafinta somaliland ee imika) uu qorey buu la yihaado sooyaal. kaas uu dad badan ku cayaayo.
Waxaa jirta buuga hadii aad akhrido booga 94 ilaa waxii ka sareeya waxuu ku cayaayaa hablaha ciiddagale, aduunka lama arag qaf intuu hablo caayo buug ku qorra, anigu waxaan u arkaa iney ku kaliftey xin iyo cuqdad ka buuxda oo u aqabo beesha cidagle, oodhan, waayo caqliga siyeey caayda habalaha buug ku qor oo qarash ku bixi si dadka dhashaaba u akhristaan waa ku tala gal uu u badheedhey.
2) Suusha labaad ee u bahan in la is weydiiyo waxa weye,
1) Qafka buuga qorey ee dadka ku cayayaa, ceeydii buuga uu kuq orey waxaa hubaala oo somaliland odhan wadda og tahey inuu ku halley wasiirnimo.hadaba yaa ka dhigey wasiir, wasiir waxaa ka dhigey muuse biixi.
Muse ma nin isna la ogbaa, anigu waxaan aqabaa haa waayo, qafka aad shaqda siineeyso waa qaf aad cv og tahey iyo waxuu guddo, waxa shaki madoona inuu muuse intaanuu ninkan wasiir ka dhigininuu buugiisa uu akhriyey, sidaa dareedeena ku racey waxuu buuga ku qarey, isla markaana ceeydii buuga lagu cayeyey hablaha cida gale uu ku siyey wasiirnimo.
Aanigu waxaan odhan lahaa macal muse biixi ha cadeeyo inuu la ogaa iyo in kale iyo waxuu wasiirnio uga dhigey,
Dadka qaar baa ku maqan belaha somaliland oo xin iyo xasidnimo ka buuxda , wasiirku kuwaas buu ku jiraa, waxaa ka sii daran madaxweynaha shaqada siiyeey.
ilaahey baaa mahd leh
Waxa qorey fuaad maxamed qawdhan arimaha bulshada lonon
facebok fuaad qawdhan